Viber - ဝီကီပီးဒီးယား
Viber သည် cross-platform voice over IP (VoIP) နှင့် မက်ဆေ့ပို့သည့် ဆော့ဝဲအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ရခုတန်း (Rakuten) ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်သည်။ ဆော့ဝဲအား ဖရီးဝဲလ်အနေဖြင့် အန်းဒရွိုက်၊ iOS, Linux, macOS နှင့် ဝင်းဒိုးတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Viber ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။ သို့သော်လည်း Desktop ပလက်ဖောင်းတွင်မူ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ဘဲ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Viber သည် နိုင်ငံတကာသို့ အခပေး ကြိုးဖုန်းလိုင်း နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည့် Viber Out ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း အထောက်အပံ့ ပေးထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Viber ကို ကွန်ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသည့် အသုံးပြုသူ အရေအတွက်သည် သန်းတစ်ထောင်ကျော်ခဲ့သည်။
Rakuten Viber (Rakuten Inc. ၏ အစိတ်အပိုင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၀; ၉ နှစ် အကြာက (၂၀၁၀-၁၂-02)
C/C++/Python (desktop, using SIP နှင့် Qt frameworks), Objective-C (iOS), Java (အန်းဒရွိုက်)
ဆော့ဝဲကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေးအခြေစိုက် Viber Media သည် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Rakuten က ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက ၎င်း၏ အမည်သည်လည်း Rakuten Viber ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Viber သည် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည်။ Viber ၏ ရုံးများမှာ အမ်စတာဒမ်၊ ဘာစီလိုနာ၊ ဘရက်စ်၊ လန်ဒန်၊ မနီလာ၊ မင့်ဆ်၊ မော်စကို၊ ပါရီ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ စင်ကာပူ၊ ဆိုဖီယာ၊ တဲအဗစ် နှင့် တိုကျိုမြို့တို့တွင် တည်ရှိသည်။
၁ ကုမ္ပဏီ၏ သမိုင်း
၁.၄ ရုရှားနိုင်ငံရှိ ဈေးကွက်
Viber Media ကို အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ Tel Aviv တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Talmon Marco, Igor Magazinnik တို့သည် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွင် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် P2P Media နှင့် iMesh ဟု ခေါ်ဆိုသည့် ဖိုင်မျှဝေသည့် Clinet တစ်ခုကို တည်ထောင်သူများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီသည် အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် လည်ပတ်လျှက်ရှိသည်။ လုပ်သားအခ နည်းပါးသည့်အတွက် ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံတွင်လည်း အခြေစိုက်ထားလျက် ရှိသည်။ Cyprus တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ Marco သည် ခေါ်ဆိုခြင်း၊ ဖုန်းအဆက်သွယ် (Contacts) များအား Synchronization လုပ်ခြင်းများကို Viber တွင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ Viber ကို အသုံးပြုမည့်သူသည် ဆဲဖုန်းနံပါတ်ကို အိုင်ဒီ (ID) အဖြစ် လိုအပ်သည်။
ပထမနှစ်နှစ်ကာလတွင် Viber သည် ဝင်ငွေများကို အမြတ်ဝင်ငွေများကို ရယူနိုင်မှု မရှိသေးပေ။ ၎င်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အသုံးပြသူများမှ ပေးဆောင်ရသည့် Viber Out အသံခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် စတစ်ကာစတိုးကို စတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် မူလအစတွင် များစွာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Marco က ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို “မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများ” အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဒေါ်လာ ၂၀ မီလီယံ ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလတွင် ၎င်းကုမ္ပဏီ၌ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်သည် ၁၂၀ ဦး ရှိသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Viber ၏ စနစ်အား ဆီးရီးယားလျှပ်စစ်တပ်မတော် (Syrian Electronic Army) သည် ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Viber ၏ ပြောကြားချက်များအအရ အသုံးပြုသူများ၏ ထိခိုက်လွယ်သည့် အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိဟု ဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Viber Media သည် ဒေါ်လာ ၉၀၀ မီလီယံရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Viber ၏ ကုန်ပစ္စည်းအမည်ကို Viber Media မှ Rakuten Viber ဟု ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး စကားလုံးအမှတ်သားပါဝင်သည့် လိုဂိုအသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Viber သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဘောလုံးကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘာစီလိုနာအသင်းနှင့် တရားဝင်မိတ်ဖက် ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် Viber သည် မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူအရေအတွက် ၈၀၀ မီလီယံ ရှိခဲ့သည်။ Statista အရ Viberအား အသက်ဝင်စွာအသုံးပြုလျှက်ရှိသည့် အသုံးပြုသူသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ၂၆၀ မီလီယံရှိခဲ့သည်။ Viber သည် အရှေ့ဥရောပ၊ ရုရှား၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဆီယံအချို့ဈေးကွက်များတွင် အဓိက ကျော်ကြားလူသိများသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အကြီးမားဆုံး ဈေးကွက်တည်ရှိသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် Viber ကို မှတ်ပုံတင်ကာ အသုံးပြုသူသည် ၃၃ မီလီယံရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ငါးခုမြောက် လူသုံးအများဆုံး စာပို့သည့် ဆော့ဝဲတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ Viber အသုံးပြုသူအရေအတွက်သည် ၃၀ မီလီယံရှိခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင်မူ ၂၈ မီလီယံ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ၁၈ မီလီယံ အသီးသီးရှိခဲ့သည်။ Viber သည် အထူးသဖြင့် အရှေ့ဥရောပတွင် ကျော်ကြားသည်။ Belarus, Moldovaand Ukraine တို့တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ အန်းဒရွိုက်တွင် ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်မှုအများဆုံး ဆော့ဝဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အီရတ်၊ လစ်ဗျားနှင့် နီပေါတွင်လည်း ထင်ရှားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မူ Viber သည် CIS နှင့် CIEE ဒေသများတွင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး မြောက်အမေရိကတွင်မူ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံတွင် Viber သည် အထင်ရှားဆုံးသော လူမှုကွန်ယက်အပ်ပလီကေးရှင်း ငါးခုတွင် ပါဝင်သည့် အပ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Viber သည် ရုရှားတွင် အသုံးပြုသူ ၅၀ မီလီယံရှိခဲ့ပြီး Whatsapp ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ မော်စကိုနှင့် စိန့်ပီတာဘက်ကဲ့သို့သော မြို့ပြများတွင် Viber သည် လျှင်မြန်စွာပင် အသုံးပြုမှု ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် ရုရှားနိုင်ငံ၏ Viber အသုံးပြုမှုသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကထက် နှစ်ဆမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၆၆ မီလီယံအထိပင် အသုံးပြုသူအရေအတွက်မှာ ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၌ Viber အသုံးပြုသူ အရေအတွက်မှာ ၁၀၀ မီလီယံ ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရှိ အခြားသော ဖော်ပြချက်တစ်ခုတွင် ရုရှားရှိ စာပို့သည့် စနစ်ကို အသုံးပြုသူများသည် Viber သို့မဟုတ် Whatsapp ကို အသုံးပြုရသည်ကို အခြားဝန်ဆောင်မှုများထက် ပိုမိုနှစ်သက်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ရှရှားနိုင်ငံရှိ Viber သည် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူရာတွင် ပေးချေမှုစနစ်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည်။
↑ Viber App Review - Free Voice and Video Calls and Messaging။
↑ Viber Out Review - How Good Is Viber for Paid Calling?။
↑ Viber: number of registered users 2018 - Statistic။
↑ About Viber။
↑ Viber DMCA POLICY။ Viber။
↑ Think Global: CultivatingaGlobal Team Culture (29 May 2017)။ 22 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Henry Cavill. Six things to know about Viber. Financial Times. February 14, 2014.
↑ ၈.၀ ၈.၁ Brett Forrest (August 23, 2012)။ The Skype Killers of Belarus။
↑ Talmon Marco's profile on LinkedIn။ 18 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jessica Geller (October 16, 2015)။ Messaging app Viber names Boston its US headquarters။ The Boston Globe။
↑ Assaf Gilad (14 February 2014)။ אקזיט ענק: רקוטן היפנית רוכשת את וייבר תמורת כ-900 מיליון דולר (in Hebrew)။ כלכליסט - www.calcalist.co.il။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hillel Koren (14 February 2014)။ Viber sold for $900m။ Globes။
↑ Viber DMCA Policy။ Rakuten Viber။ Viber Media။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Viber Media။ Foursquare။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brian Blum (March 24, 2011)။ Top 10 iPhone apps from Israel။ ISRAEL21c။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Viber For iPhone Aims To Rival Skype's App, Is Amazingly Amazing။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Viber&oldid=481609" မှ ရယူရန်
၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။